Ngaba uHlobo lweMigca lusebenza kuMndilili kaJoe? – CYMRU
No Comments on Ngaba uHlobo lweMigca lusebenza kuMndilili kaJoe?
Ukuhlengahlengiswa kwe-Edge yindlela yokungcakaza eyinzuzo eyathi yafumana udumo oluqhelekileyo kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Ingcali yokungcakaza uPil Ivey wasebenzisa obu buchule ukwenza phantse ama-21 ezigidi zeedola kwinzuzo.
Ewe kunjalo, i-Ivey ngumdlalo wexesha le-10 leNtshatsheli ye-Poker kunye ne-multimillionaire. Akufani nokuba wayephethe i-Joe Six-pack ehamba ezantsi ekhasino kwaye ephumelela ithamsanqa elitshintsha ubomi.
Oko utshilo, unokuzibuza ukuba kunokwenzeka ukuba i-Joe ephakathi iphumelele njengo-Ivy-okanye ubuncinci isixa semali-ngokulungisa umda. Ndiza kuthetha kakhulu malunga neendlela zam zokugqibela kunye nokuba kunokwenzeka ukuba zisetyenziselwe umgembuli ophakathi.
Umsebenzi woLungelelaniso uSebenza njani?
Ukuhlelwa kwemphetho kubandakanya ukujonga ezitenxileyo kumakhadi amakhadi. Iidesika ezininzi zeekhasino zibonisa ukungafezeki okuncinci okunokuxhatshazwa.
Uhlala ufumana ezi zinto zingafezekanga kumacala amade emakhadi. Umzekelo, unokuqaphela ukuba idesika ibonakalisa iidayimani epheleleyo kumda osekhohlo wamakhadi athile kunye nesiqingatha seedayimani kwabanye.
Ukuba unokubona ukuba leliphi na inani leekhadi elilingana nemilinganiselo epheleleyo okanye enesiqingatha seedayimani, ke unethuba lokuqikelela amaxabiso ngaphambi kokuba amakhadi aphose ngaphezulu.
Udinga imiphetho ecwangciswe ngendlela eya kukuvumela ukuba ubone iipateni zedayimani epheleleyo nenesiqingatha. Ukuba amakhadi ahlala ejikelezwa ngexesha le-hand-shuffles, ke awuzukufumana thuba lakuyeka ukuhlengahlengiswa.
Ke ngoko, abahleli bomda badla ngokudlala kwiitafile ezinomatshini bokuzenzekelayo. Ngokwahlukileyo kwimidlalo esiphathwe ngesandla, umatshini akajikelezi amakhadi ngexesha lokuhamba kwamanqindi.
Imingeni yokuHlela kweMihlaba yoNgcakazo oluyi-avareji
Ukuhlelwa komda kunzima ngokwaneleyo ukushenxisa kumbono osekwe kubuchule. Kuba nzima nangakumbi xa uthathela ingqalelo le miceli mingeni ilandelayo.
Kulula ukuNgcakaza abaTyebi
Ukuqhelaniswa nekhadi kuzisa ingxaki enkulu kubahlengi abaqhelekileyo abagembayo abazama ukuhlela imiphetho. Nje ukuba kugqitywe, amakhadi kufuneka aqhubeke nokuma kwindawo yawo ngexesha lokuqhubana nokudibana.
Lo msebenzi uya kuba lula xa kusetyenziswa i-shuffler ezenzekelayo. Nangona kunjalo, uninzi lweetafile ze-baccarat yimidlalo ejijeke ngesandla.
Ukuba ungumthengisi oqhelekileyo ophakathi kwe- $ 5 needola ezingama-25 ngesandla, awunaso ngqo isicelo sokukhethekileyo. Kuya kufuneka uhambe nokuhamba kwayo nantoni na eyenzekayo etafileni.
Abathengisi abaphezulu, njengo-Ivy, banethuba elingcono lokucela impumelelo. Iibhasino zikulungele ukuhlonipha naziphi na iinkolelo ezinokubakho kubangcakazi ukuba zikulungele ukubheja ngokwaneleyo.
Umzekelo, bobabini uCrockfords (London) kunye neBorgata (Atlantic City) banike u-Ivey le minyinyiva ilandelayo:
Umthengisi ongumTshayina othetha isiMandarin
Idesika yeGemaco emfusa
Amakhadi athile ajikelezwe ngendlela ekhethekileyo (kucingelwa ukuba zizizathu ezibonisa inkolelo)
Awungekhe uhlale etafileni ye-baccarat ye- $ 5 kwaye uqalise ukwenza ezi mfuno. Uya kuhlekwa ngaphandle kweekhasino.
U-Ivey wenza idiphozithi yezigidi zeedola eBorgata naseCrockfords. Esi sibonda simfumene ilungelo lokwenza izicelo ukuba abadlali abaqhelekileyo abanakukwazi.
Usebenzise ezi zibonelelo zikhethekileyo ukuphumelela malunga ne-12 yezigidi zeedola eCrockfords kunye nenye i- $ 9.6 yezigidi eBorgata. Kodwa njengoko ndiza kugubungela ngokulandelayo, akafumananga ukugcina yonke le mali.
Ukuhlelwa komda kubuxoki kwindawo engacacanga phakathi kokufumana ithuba lokungcakaza okusemthethweni nokukhohlisa. Ngokungafaniyo nokumakishwa kwamakhadi okanye ukubiwa kweethiphu etafileni, ukuhlelwa komda akuyoyonto ecacileyo yekhasino.
Abo basebenzisa le ndlela badinga izakhono ezizodwa zokubona amanqaku ashiyekileyo enamakhadi. Ngapha koko, abayisebenzisi nasiphi na isixhobo okanye ukutsala amakhadi kwimikhono yabo.
Nangona kunjalo, iijaji kuzo zombini iJersey kunye neLondon zazimi kwicala lekhasino. Baphawule ukuba, nangona u-Ivey engazange acinge ukuba uyakopela, ukuhlela umda ekugqibeleni kungaphaya kokudlala okusemthethweni.
Esi sicwangciso asinakuba yinto esenza ukuba uphoswe ejele njengamakhadi okumakisha. Nangona kunjalo, i-yekhasino inokumangalela kwaye ufumane imali yabo.
Mhlawumbi ukuhlengahlengiswa komda kuya kufaneleka yingxaki ukuba bekulula. Nangona kunjalo, obu buchule bunzima njengoko beza malunga nokubetha ikhasino.
Okokuqala, kuya kufuneka udlule kwiidesika ezahlukeneyo ezisetyenziswa kwiikhasino. Injongo yakho kukubona iindawo ezitenxileyo kumakhadi, ukuba akhona, kwimiphetho emide.
Isiphelo sendlela yokucwangcisa amakhadi amaxabiso aphezulu ukusuka kwexabiso eliphantsi. Ucinga ukuba ungakwenza oku kumdlalo, unethuba elingcono lokwazi ukuba ngawaphi amakhadi aza kujongana nawo phambi kokuba abhaqwe.
Elona candelo linzima libandakanya ukuhlela imiphetho njengoko udlala. Awunamakhadi ngqo phambi kobuso bakho ngexesha lomdlalo kwaye kufuneka ukwazi ukubona imiphetho kumgama omfutshane.
Isakhono sakho asisiye kuphela esibalulekileyo apha. Ukwafuna iimeko ezifanelekileyo, kubandakanya umatshini otshisayo kunye nomgangatho onesiphoso, ngaphambi kokuba uzuze kwesi sicwangciso.
← Imidlalo yeMarble kunye nokungcakaza → Uyenza njani iKhuphiswano lweMidlalo yeKhasino kunye neKhuphoni